ikhaya » Okufumaneka » I-Caringo Ukunikezela ngee-TB ze-100 zamahhala ze-S3 ezifikelelekayo, Isitoreji esikwi-Secure-Out Out kwi-Media ne-Entertainment Firms
I-Caringo Ukunikezela ngee-TB ze-100 zamahhala ze-S3 ezifikelelekayo, Isitoreji esikwi-Secure-Out Out kwi-Media ne-Entertainment Firms
Inkampani isusa ukhuseleko kunye neendleko zokungena kwiifemu ze-M & E ezifuna iinzuzo zokugcina izinto ngaphandle kweendleko ezingaphambili
Caringo, I-cloud-out cloud out & inkampani yendawo yokugcina impahla, namhlanje ivakalise ukuba inika ilayisenisi ye-100 ye-TB egcweleyo yamahhala ngokupheleleyo kwiifayile ezixhasayo zeMedia & Entertainment (M & E) ezizama ukugcina, ukulawula nokukhusela iilayibrari ezikhulayo. Zeempahla zedijithali ngelixa zigcina zifikeleleke ngokukhuselekileyo. Amafemu afanelekileyo afaka kodwa awanamkhawulo kwii-studio zokurekhoda, ukudala umxholo kunye nezindlu zendlela yokuvelisa, abapapasho kunye nama-studios.
"I-IT isebenza kwindawo ye-M & E iphantsi kwengcinezelo engqongqo ukubonelela ngokugcinwa kwexesha elide kunye nokukhangela kwangoko kunye nokunikezelwa kwabathengi kunye nababukeli," kutsho uAdrian Herrera, oyiNtloko ngongameli weNtengiso kwiCaringo. "Ifu aliyona inketho enokubakho abaninzi ngenxa yokhuseleko kunye neendleko ezixhalabisa. Isisombululo salokhu kusetyenziswa iteknoloji efanayo enegunya lamagumbi amakhulu-ukugcinwa kwezinto, ukhuselekile kwiziko labo leenkcukacha. Ngommiselo wethu namhlanje, senza kube lula kumafomu afanelekileyo ukuba aqaliswe ngokunikela i-100 terabytes yokugcinwa mahhala. "
Ilayisenisi ye-100 ye-TB kunye nokubonisana ngokudibeneyo kufumaneka ngokukhawuleza kwiifom ze-M & E ezifanelekileyo. Amaqela anentshisekelo angatyelela Www.caringo.com/MandE/ ufuna ulwazi olungolunye.
I-Field-hardened, i-vetted kwaye ivavanyelwe ngaphezu kweyhumi kwimigangatho ephezulu yeenkcukacha zentembeko nokuthembeka, iCaringo Swarm isebenza njengesiseko seencwadi eziphathekayo eziphathekayo zeelayibrari kunye neenkonzo zokugcina kwiinkalo ezahlukeneyo karhulumente, iinkonzo zonxibelelwano, imfundo, kunye nokuzonwabisa Imibutho kuquka iSebe lezoKhuseleko, iSebe lezoBulungisa, iBT, i-IQ Media, iYunivesithi yaseYohn Hopkins, i-British Telecom, i-NEP kunye namakhulu amaninzi kwihlabathi. Ukuxhamla kufakelwa kuyo nayiphi na ingxube yezinto eziphathekayo zokugcina impahla, ukuyiguqula ibe yindawo yokugcina izityebi ezingenamkhawulo kunye nezisigxina kunye nokukhusela i-asethi, ukuphathwa kwempilo, ukukhangela kunye nokukhuselwa okwakhiwe kuyo.
Igumbi loLawulo lwe-NEP
Isiphumo sisisombululo esilula ngokukhawuleza kwimveliso yeendaba kunye nokuthunyelwa kwempahla, ukusabalalisa kunye nokugcinwa kwempahla yolondolozo, ukunikezela kwi-75% yokunciphisa ukugcinwa kwe-TCO ngokusebenzisa i-hardware ekhethekileyo, ukusebenza nokusebenza kwamanzi okuquka oku:
I-hardware ehamba phambili yezoshishino kunye nokusetyenziswa kwe-server kumxholo wakho. Sebenzisa kuze kufike kwi-95% yendawo yokusebenza kanzima kunye ne-100% yeendawo zokuqhuba iidijithi ze-digital.
Ukukwazi ukuzenzekela ngokuzenzekelayo ukusebenza okanye umthamo kwimigqa ye-90 kwaye uqhubeke uphucula i-hardware ngaphandle kwexesha lokuchitha okanye ukuphazanyiswa ukuba ufikeleleke kwi-asethi.
Ukuxhamla kuthatha uxanduva lokulinganisela umthwalo kwi-fly.
Ukuhluleka kweNode ukumelana nokukhangeka, ukuphilisa.
Ukukhuselwa komgaqo-nkqubo ozenzekelayo ukulungiselela ukufikeleleka ngokukhawuleza okanye kwiziko lezandla zedatha ekunikeni ukugcinwa kwebanga loshishino ngenkxaso ngenkxaso yokuhlaselwa kwe-ransomware.
Ukuqinisekiswa kwe-MD5 kuqhubekayo, kungekhona kuphela xa iifayili zifundwa
Ukubambisana kweembambano kunye nokufikelela okuvunyelwe ngu-Bhala / Funda / Hlela nge-HTTP, S3 okanye i-NFS ngokuchanekileyo (ngokuphunyezwe ngokufanelekileyo).
Iifayile ezibhaliweyo nge-NFS, HTTP, i-S3, ziya kufumaneka ngokukhawuleza ngeyiphi na enye iprotocol.
Ukubuyiswa kwempahla ngokukhawuleza kunye nokuthunyelwa kwangoku ngokukhawuleza ngokukhangela okuhlangeneyo kunye nokukwazi ukongeza imethadatha yesithethe.
I-inventory Search inventories yazo zonke izinto kunye nemethadatha yenza ukukhawuleza ngokukhawuleza.
I-Caringo Swarm iyisisombululo esilungileyo kwiifemu ze-M & E ezijongene nokulinganisela ukulindela kweemveliso ukuba ukugcinwa kufuneka kube mahhala kwaye i-asethi kufuneka ifumaneke ngokukhawuleza kuyo nayiphi na ifowuni.
I-Caringo ye-M & E:Www.caringo.com/MandE/
ilifu free ukudityaniswa Ukugcinwa Kwezinto SoftAtHome, MStar, iCES2017 yoGcino TB	2017-08-29
Previous: UMlawuli oNcedisayo - iMedia & Creative Emerging Media
next: I-Espial iqalisa ukuphakamisa i-Cloud SaaS Platform yabaSebenzi baseYurophu kwi-IBC2017
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "I-Caringo Ukunikezela ngee-TB ze-100 zamahhala ze-S3 ezifikelelekayo, Ukugcinwa kweSitoreji esiKhuselekileyo kwi-Media ne-Entertainment Firms". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/caringo-offering-free-100-tbs-of-s3-nokungenakunyaniseki- ukukhuseleka- . Enkosi.